Singapore: 16 jir doonayay inuu weeraro labo masaajid oo la xiray |
Singapore: 16 jir doonayay inuu weeraro labo masaajid oo la xiray
Wiil 16 sano jir ah ayaa lagu xiray Singapore isagoo sida la sheegay qorsheynayay in sanad-guurada weerarradii Christchurch uu dilo Muslimiinta labo masaajid.
Wiilkan oo sida uu sheegay dhiirrigelin ka helay Brenton Tarrant oo ah ninkii dadka badan ku dilay Christchurch, ayaa la sheegay inuu qorsheynayay inuu toorrey la dhaco Muslimiin isla markaana uu si toos ah u duubo.
Waa qofkii ugu yaraa ee la xiro iyadoo la adeegsanayo Sharciga Ammaanka Gudaha, oo oggolaanaya in qofka la xiro iyadoo aan maxkamad la soo taagin.
Weerarkii Christchurch wuxuu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara taariikhda New Zealand.
Ilaa 51 qof ayaa 15-kii March 2019 ku dhintay labo masaajid, kaddib markii uu dilay Tarrant – oo haatan ku xukuman xabsi daa’im aan cafis lahayn.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Singapore ayaa sheegtay in wiilkan 16 jirka ah ee u dhashay jasiiraddaas, oo aanan magaciisa la shaacin uu heysto diinta Kirishtaanka, isla markaana uu nacayb fara badan u hayo diinta Islaamka.
Waa qofkii ugu horreeyay ee la sheegay inay saameyn ku yeesheen xagjiriinta midig-fog ee Singapore, oo falalka argagaixisadu ay naadir ku yihiin. Wiilkan ayaa xirnaa tan iyo bishii la soo dhaafay.
Wasaaradda ayaa sheegtay inay caddahay inuu saameyn ku yeeshay Tarrant, maaddaama uu qorsheynayay inuu weerarrada fuliyo 15-ka March sanadkan, oo ku aaddan sanad guurada weerarradii Christchurch. Waxaa sidoo kale la sheegay inuu qirtay in uu fakradda ka helay weerarkii sida tooska ahayd loo duubay ee Tarrant.
Waxaa la sheegay inuu qorsheynayay inuu weeraro labo masaajid – Assyafaah iyo Yusof Ishak – oo labadoodaba u dhow gurigiisa.
Wiilka ayaa isku dayay inuu xado kaarka bankiga aabbihiis isla markaana uu kireysto gaari kuna dhex wato labada masjid dhexdooda oo ku yaalla waqooyiga jasiiradda. Ma uusan heysan leysinka gaari kaxaynta, balse wuxuu ku kalsoonaa inuu qorshaha u hagaagi doono, sida ay sheegeen saraakiisha Waaxda Ammaanka Gudaha.
Wiilkan yar ayaa la sheegay inuu markii hore qorsheynayay inuu adeegsado qori sida Tarrant, balse uu go’aansaday inuu isticmaalo seef, kaddib markii ay ku adkaatay inuu hub ka iibsado Singapore, oo leh shuruuc adag oo dhanka iibsashada hubka ah. Wasaaradda ayaa intaas ku dartay inuu isku dayay in keligii uu fuliyo weerarka.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inuu diyaariyay dokumentiyo uu doonayay inuu qeybiyo kahor weerarka, mid wuxuu khuseeyaa weerarradii Nice ee sanadkii hore, iyo mid ku saabsan nacaybka uu u qabo Islaamka, isagoo rajo ka muujiyay in weerarka uu damacsan yahay loo qiil deyi doono.
Booliiska ayaa sheegay in warka ay heleen bishii November, wax yar kaddibna ay soo xireen.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in wiilku uu qirtay inuu xisaabta ku sii darsaday in labo mid ay noqon doonto – in la xiro kahor inta uusan weerarka fulin iyo in qorshihiisa uu u hirgalo kaddibna ay booliiska dilaan”.
“Si buuxda ayuu u diyaarsanaa, isagoo og inuu dhiman doono, wuuna u diyaarsanaa inuu dhinto,” ayuu yiri wasiirka sharciga iyo arrimaha gudaha K Shanmugam.
Wiilkan ayaa loo sameyn doonaa dhaqan celin, si looga tirtiro fekerka uu aaminsan yahay.